Mpikatroka roapolo avy amin’ny farany havanana voaheloka vokatry ny fanafihana mpanao gazety tamin’ny 5 jolay · Global Voices teny Malagasy
Farafahakeliny mpanao gazety 50 voadaroka nandritra ny diabem-PIREHAREHANA nomanina tamin'ny taon-dasa.
Voadika ny 30 Avrily 2022 19:18 GMT
Mpomba an'ireo mpikatroka avy amin'ny farany havanana, teo anoloan'ny efitrano fitsaràna. Sary natolotra tam-pitiavana avy amin'i Mariam Nikuradze/OC Media. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Tamin'ny 4 Aprily 2022 no nivoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan'ny OC Media ity tantara ity. Dika nasiam-panovàna no averina avoaka etoana ao anatin'ny fifanarahana iray hifampizara votoaty.
Tamin'ny lohataona lasa, ny 5 Jolay ireo LGBTQ+ mpikatroka dia niomana hanao Diabem-Pireharehàna iray (March Pride) tao Tbilisi renivohitr'i Zeorzia, fikarakaràna tafiditra tao anatin'ny Herinandrom-Pireharehàna 2021 (Week Pride), saingy nofoanana ilay Diabe noho ireo fanafihana feno herisetra nataon'ireo mpanao hetsipanoherana tsy mpankasitraka ny LGBTQ+. Raha kely indrindra dia 50 ireo mpanao gazety no voadaroka, ary nisy andian'olona mahery setra nanafika sy nanakorontana ny biraon'ireo mpikarakara ilay diabe — ny Hetsika Fireharehana sy Henatra ao Tbilisi, vondrona iray misy ireo mpikatroka liberaly. Taorian'ireo fanafihana, nohelohin'ny Tbilisi Pride tao anaty fanambaràna iray ilay herisetra sy ny tsy fandraisana andraikitra avy amin'ireo manampahefana. Nandritra izany fotoana izany, nanome toky ny Ministeran'ny Atitany ao Zoerzia fa hanao fanadihadiana momba ireo fanafihana nanjo ireo mpikarakara. Ny 4 Aprily, volana sivy taorian'ireo fanafihana, namoaka didy ny fitsaràna iray ao Tbilisi nandritra ny fitsaràna fanintelony sady farany. Teo ivelan'ny fitsaràna, niandry ny valim-pitsaràna ireo mpiaro ny LGBTQ+ sy ireo mpanangona vaovao, toy ny nataon'ireo an-jatony maro mpanohana avy amn'ny Alt Info, vondrona mpomba ny Rosiàna ary avy amin'ny farany havanana, izay naneho hevitra an-katezerana rehefa nambara ilay didim-pitsaràna. Feno andiana pôlisy marobe nanasaraka ny andaniny sy ny ankilany.
Feno pôlisy marobe eto amin'ny Fitsaran'ny Tanànan'i Tbilisi, toerana hamoahana ny didim-pitsaràna ho an'ireo enina voaheloka tamin'ilay fanafihana an'i Lekso Lashkarava sy Miranda. Misy hetsika roa hafa eto ho fanoherana io famoriambahoaka io: mpanao gazety sy mpikatroka ary ireo izay manohana ny voampanga, avy amin'ny vondrona Alt Info ny ankamaroany. pic.twitter.com/G961IcYEZ6
Rehefa atambatra, olontsotra 20 no voasambotra sy notsaraina, nomena sazy enina volana hatramin'ny dimy taona. Ny iray nahazo sazy ara-bola ary navotsotra. Tsy nisy niaiky ho meloka, na iray aza, tamin'ireo nampangaina, ary nanamafy fa tsy nikasi-tànana na iza na iza ry zareo nandritra ilay korontana. Ambonin'izay, tsy nisy voaheloka na iray aza tamin'ireo nanatanteraka ireo fanafihana feno herisetra, izay notarihan'ilay vondrona mpanao an-tendro Alt Info.
Herisetra tsy nisy toa azy
Nanomboka tamin'ny 2 Jolay 2021 ny Herinandrom-Pireharehana tao Tbilisi, niaraka tamin'ny fandefasana tanaty efitrano mihidy ny sarimihetsika iray fanadihadiana momba ny Diabem-Pireharehàna 2019 izay nofoanana taorian'ny nandàvan'ny pôlisy tao an-toerana tsy hanome fiarovana azy ireo. Natrehan'ireo diplaomaty sy ireo mpikambana avy amin'ireo vondron'ny fiarahamonina sivily tao an-toerana ny fandefasana ilay sarimihetsika “Diaben'ny Fahamendrehana”. Nitangorona teo ivelan'ny toerana ireo mpanao hetsipanoherana tsy mankasitraka ilay fireharehana, tamin'ny fotoana voalaza indrindra fa nisamboran‘ny pôlisy olona teo amin'ny roapolo teo ho eo izay niezaka ny hanakorontana ilay hetsika. Ny Diaben'ny Fahemendrehana natao tamin'ny taona lasa no tokony ho ny faratampony tamin'ireo andiana hetsika naharitra herinandro ho fankalazàna ny Fireharehàna 2021.
Miteny ho azy ireo sarina herisetra naparitak'ireo mpanao gazety nanatrika ilay Diabe. Ireo mpikarakara ilay Diabe dia namaritra ilay herisetra tamin'ny 5 Jolay ho toy ny “famakiana ady iray atao amin'ireo soatoavina demaokratika sy ny fiarahamonina sivily ary ny zotram-piainana eorôpeàna diavin'ny firenena.”
Notafihan'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo mpanao gazety, tamin'ny fiampangàna azy ireo ho “mampiroborobo ny hevitry ny vondrompiarahamonin'ny LGBT .” Mpanao gazety iray no voalaza fa notaritaritina pretra iray. Araka ny tatitra iray navoakan'ny OC Media, ny Fiangonana Ortôdôksa Zeorziàna no tena mpikarakara fototra tamin'ireo hetsipanoherana tsy mankasitraka ny Fireharehana, ka ireo pretra avy tao no hita nandritra ireo fihetsiketsehana, ary indray mandeha raha kely indrindra no toa hita niditra tamina famelezana mpanao gazety iray.
Sary mampangorintsina! Sotasota sy daroka nataona andian'olona mpankahala pelaka tamin'ilay Zeorziàna mpanao gazety Rati Tsverava, notaritaritin'ireo pretra teny amin'ny araben'i #Tbilisi. Mpanao gazety ampolony maro hafa niharam-pamelezana feno herisetra, raha nitazana fotsiny kosa ireo pôlisy. Tsy ampy ny pôlisy naparitaky ny governemanta #TbilisiPride #Georgia pic.twitter.com/jpiJzLwTRv
Araka ny tatitry ny mpamoaka vaovao ao an-toerana Civil.ge, pretra iray, raha nitodika niteny tamin'ny vahoaka tamin'ny 5 Jolay 2021, dia nandrisika ny hanaovana herisetra “ho soa ho an'ny tanindrazana”:
“Voatery hampiasa herisetra ianareo ho soa ho an'ny tanindrazana, ny firenena, ary izay masina,” hoy ny pretra iray nitodika tamin'ireo andian'olona avy amin'ny farany havanana mpankahala pelaka androany vao maraina.
Nilaza ny Patriarka avy amin'ny Fiangonana Ortôdôksa fa ialàny lavitra ireo fanambaràna miantso ny hanaovana herisetra. #TbilisiPride #LGBTQ pic.twitter.com/KqaQpbGIpL
— Civil.ge (@CivilGe) 5 Jolay 2021
Ho an'ny Praiminisitra ao Zeorzia, ireo mpikarakara ilay Diabe no tompon'andraikitra tamin'ny herisetra nisy. Raha niteny nandritra ny fivorian'ny governemanta, nilaza ny Praiminisitra Irakli Garibashvili fa “tsy am-pisainana” no nikarakaran'ireo mpikarakara diabe ho eny amin'ny toerana izay natao ho an'ny daholobe ary mety hiteraka “fifanandrinan'olontsotra” ao anatin'ny fotoana izay ahitàn'ny vahoaka fa “tsy azo ekena” ny maripanondroana hoe LGBTQ+.
Noho ny herisetra dia voatery nandao ny biraony ny Hetsika Henatra, vondrona Zeorziàna mpikatroka mampiantrano ireo mpikarakara ny Fireharehana Tbilisi, hoy ny Amnesty International.
Saika nanameloka ireo fanafihana daholo ireo fikambanana erantany sy ireo mpitarika eorôpeàna.
Iray tamin'ireo mpanao gazety, Aleksandre Lashkarava, 37 taona, no hita faty tao an'efitranony ny 11 Jolay, tao Tbilisi. Lashkarava, fantatra tanivon'ireo mpiaramiasa taminy tao amin'ny TV Pirveli tamin'ny hoe Lekso, dia isan'ireo mpanao gazety 50 teo ho eo naratra teny am-panangonana vaovao momba ny Diabem-Pireharehana Tbilisi tamin'ny 5 Jolay. Vato Tsereteli, tompon'ny TV Pirveli, dia nanome tsiny ny governemanta tamin'ny fahafatesan'i Laskharava.
Nihazakazahan'ny Ministeran'ny Atitany ny nanilika izay rehetra ahiahy momba ny anton'ilay fahafatesana, tamin'ny fametrahana fa maty noho ny fandraisana fatran-java-mahadomelina tafahoatra ilay mpanao gazety. Araky ny tatitry ny Radio Tavisupleba, ny Sampana Zeorziàna ao amin'ny Radio Free Europe tamin'izay fotoana izay, nihazakazaka naka ny vatana mangatsiakan'ilay mpanao gazety ny pôlisy mba hanaovany fitsirihana, na teo aza ny fangatahan'ny fianakaviana hampidirana manampahaizana manokana tsy miankina. Nony farany, ny Janoary 2022, namoaka tatitra momba ilay fitiliana ireo manampahefana Zeorziàna nilazàna fa fatran-java-mahadomelina tafahoatra no nitarika ho amin'ny fahafatesan'i Lashkarava, famintinana izay nampametra-panontaniana ireo mpiaramiasa amin'i Laskharava sy ireo mpanakiana ny governemanta ary ireo fikambanana mpanaramaso.
Nandritra ilay fotoam-pitsaràna fanintelony tamin'ny 4 Aprily, enina tamin'ireo voampanga no nohelohina dimy taona an-tranomaizina noho ny fanaovana herisetra tamin'ilay mpanao gazetin'ny TV Pirveli, Miranda Baghaturia, sy ilay mpakasary nodimandry, Alexandre (Lekso) Lashkarava. Teo ivelan'ny efitrano fitsaràna, nankasitraka ilay didim-pitsaràna i Baghaturia, tamin'ny filazàna hoe “Nandritry ny 10 volana aho no nihazona ny fofonaiko, ankehitriny aho afaka misento .”
Ireo pelaka mpikatroka izay niezaka ny hanohitra ny fankahalàna pelaka sy ny famoretana tato anatin'ny taona vitsy farany dia im-betsaka niharan'ny fanafihana ataon'ireo mpanao hetsipanoherana mandàla ny nenti-drazana. Tamin'ny 2019, ny Diabem-Pireharehàn'ireo Pelaka tao Zeorzia dia tsy afaka notanterahana araka izay voalahatra, taorian'ny nanambaràn'ny Ministeran'ny Atitany ao Zeorzia fa tsy hiaro azy ireo ny pôlisy.